Ny fampiharana Android efatra tsara indrindra hianarana teny frantsay | Androidsis
Ny teny frantsay dia iray amin'ny fiteny malaza indrindra nandritra ny taona maro tany an-tsekoly sy ivon-toeram-pianarana. Betsaka ny olona te hianatra ilay fiteny, ka mandeha mianatra sy mianatra. Ny finday Android-tsika dia mety ho mpanohana tsara amin'ity lafiny ity.. Satria manana rindranasa afaka manampy anay izahay rehefa mianatra fiteny vaovao toa izao.
Noho ireo fampiharana ireo dia afaka manao fanazaran-tena amin'ny fanazaran-tena frantsay izahay, mba hihatsara ny baikonay amin'ny fiteny. Noho izany Avy eo dia avelanay ianao miaraka amina safidy Android fampiharana tsara indrindra amin'ity karazana ity izay mety ho hitantsika.
Ireo rindranasa rehetra ireo dia hita mora foana ao amin'ny Play Store, ary fampiharana maimaim-poana izy ireo. Noho izany dia fanamafisana tsara hianarana ilay fiteny izy ireo, nefa tsy mila mandany vola amin'izy ireo. Ireto no rindranasa niditra tao anaty lisitra:
1 Mianara Offline frantsay
2 Mianara miteny frantsay maimaim-poana - Mondly
3 Mianara frantsay fotsiny
Mianara Offline frantsay
Ity fampiharana ity dia efa manazava tsara ny asany amin'ny anarany. Izy io dia fampiharana izay manampy hianatra ilay fiteny mora foana, ary tsy mila fifandraisana Internet. Safidy tsara io, indrindra raha te hianatra voambolana sy fomba fiteny mahazatra isika mandritra ny andro. Ka raha eto amin'ny firenena isika dia mora be amintsika ny mitantana tsy misy olana be loatra. Ny zavatra rehetra dia mizara ho sokajy, izay mampahazo aina azy tokoa ny fampiasana azy. Safidy tsara rehefa mandeha vakansy any amin'ny firenena.
Mianara miteny frantsay maimaim-poana - Mondly
Faharoa, mahita fampiharana iray izay nanjary nalaza teo amin'ny tsena izahay. Manana andiana fanazaran-tena isan-karazany izahay, ao anatin'izany ny lesona isan'andro. Amin'izay isan'andro ampiasantsika ilay rindranasa dia afaka mandroso mora foana isika ary hianatra teny sy fitenenana vaovao amin'ilay fiteny. Inona koa, manana resaka isika ary afaka manao fanazaran-tena mora foana. Ka hanatsara ny faritra maro isika amin'ny fotoana iray. Safidy feno ary miavaka amin'ny interface tsotra atolotry ny fampiharana.
Mianara Mahereza amin'ny teny frantsay
Mianara frantsay fotsiny
Ny fampiharana fahatelo ao amin'ilay lisitra dia safidy iray hafa izay nanjary nalaza tao amin'ny Play Store. Fampiharana iray izay mampanantena hanampy antsika hahay fiteny mora foana. Manana andian-teny maro misy ao izahay, izay hanampy anay isan'andro sy rehefa miresaka. Raha atotaly dia misy andianteny mihoatra ny 1.000 amin'ny sokajy 30 samihafa. Noho izany dia mandrakotra karazana toe-javatra maro. Manana audios ihany koa izahay, misy mpandahateny teratany, mba hianarantsika hihaino sy hahatakatra ilay fiteny, ankoatry ny fikirakirana ireo lantom-peo isan-karazany misy. Misy koa fanazaran-tena voambolana maro misy ao.
Mianara tsotra amin'ny teny frantsay
Mety tsy ho very io lisitra io, iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra amin'ny fianarana fiteny amin'ny ankapobeny. Isan'ireo fiteny maro izay misy ao dia ahitantsika ny teny frantsay. Manana fanazaran-tena maro izahay ao, sokajy isan-karazany. Ka afaka mampihatra voambolana, fitsipi-pitenenana, famakiana na fahatakarana fihainoana isika ... Ka tsy ho mankaleo amin'ny fotoana rehetra isika amin'ny fampiasana ilay rindranasa. Izany no tena mahaliana azy, fa manana karazana fanazaran-tena ao isika. Safidy tsara dinihina.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia mahita mividy sy dokam-barotra ao anatiny aza izahay. Ny fividianana dia manana fidirana amin'ny atiny fanampiny. Raha ampiasainao betsaka izany ary te handroso haingana kokoa amin'ny fiteny iray ianao, amin'ity tranga ity dia mety ho safidy tsara ny mandinika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fampiharana Android tsara indrindra hianarana teny frantsay
Ny Xiaomi Mi 8 no ho finday avo lenta voalohany miaraka amin'ny GPS matetika